၇.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
14 ထိုအခါဖာရောမင်းသည်လူကိုစေလွှတ်၍ ယောသပ်ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ယောသပ်သည် ထောင်ထဲကအလျင်အမြန်ထွက်ရ၍၊ မုတ်ဆိတ်ညှပ်ခြင်း၊ အဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးမှ အထံတော်သို့ဝင်ရ၏။ 15 ဖာရောမင်းကလည်း၊ ငါသည်အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ပြီ။ အနက်ကို အဘယ်သူမျှမဖတ်နိုင်။ သင်သည် အိပ်မက်ကို နားလည်သောဉာဏ်နှင့် အနက်ဖတ်နိုင်သည်ကို ငါကြားရပြီဟုဆို၏။ 16 ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်တော်သည် အလိုအလျောက်မတတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာအဖြေစကားကို ဖာရောဘုရင်အားပေးတော်မူပါစေသောဟု လျှောက်လေ၏။ 17 ဖာရောမင်းကလည်း၊ ငါမြင်မက်သည်မှာ၊ မြစ်နား၌ငါရပ်နေ၏။ 18 အဆင်းလှ၍ဝသော နွားခုနစ်ကောင်တို့သည် မြစ်ထဲကထွက်၍၊ မြစ်နားမှာပေါက်သော မြက်ပင်ကိုစားလျက်နေကြ၏။ 19 ထိုနွားတို့နောက်မှ၊ အဆင်းမလှ ပိန်ကြုံသောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ထွက်လာကြ၏။ ထိုမျှလောက် အရုပ်ဆိုးသောနွားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် တစ်ခါမျှမမြင်ရစဖူး။ 20 အဆင်းမလှပိန်သောနွားတို့သည်၊ ဝသောအရင်နွားခုနစ်ကောင်တို့ကို ကိုက်စားကြ၏။ 21 စားပြီးသောနောက်၊ စားမှန်းကိုအဘယ်သူမျှမသိရ။ အရင်ကဲ့သို့ အရုပ်ဆိုးသေး၏။ ငါလည်းနိုး၏။ 22 တစ်ဖန်ငါမြင်မက်ပြန်သည်ကား၊ အလုံးကြီး၍ကောင်းသော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် စပါးတစ်ပင်တည်း၌ဖြစ်ကြ၏။ 23 ထိုနောက်မှ ညှိုးနွမ်းလျက်အလုံးသေး၍ အရှေ့လေဖြင့်ပျက်သော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် ပေါက်ကြ၏။ 24 အလုံးသေးသောစပါးနှံတို့သည် ကောင်းသောစပါးခုနစ်နှံတို့ကို စားကြ၏။ ထိုအိပ်မက်ကို ဗေဒင်တတ်တို့အားငါကြားပြော၍ အနက်ကို အဘယ်သူမျှမဖတ်နိုင်ဟု ယောသပ်အားပြောဆိုတော်မူ၏။
25 ယောသပ်ကလည်း၊ ဖာရောဘုရင်မြင်မက်တော်မူသော အိပ်မက်ကား တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါ၏။ ဘုရားသခင်ပြုလတ္တံ့သောအမှုကို ဖာရောဘုရင်အား ပြတော်မူပြီ။ 26 ကောင်းသောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ ကောင်းသောစပါးခုနစ်နှံတို့သည်လည်း ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အိပ်မက်တော်ကား တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါ၏။ 27 ထိုနွားတို့နောက်ထွက်လာသောနွား၊ ပိန်၍အရုပ်ဆိုးသော နွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အရှေ့လေဖြင့်ပျက်သော စပါးဖျင်းခုနစ်နှံတို့သည်လည်း၊ အစာခေါင်းပါးသော ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ 28 ဖာရောဘုရင်အား ကျွန်တော်လျှောက်လိုသောအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်ပြုလတ္တံ့သောအမှုကို ဖာရောဘုရင်အားပြတော်မူ၏။ 29 အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဝပြောသောနှစ်ခုနစ်နှစ်ရှိလိမ့်မည်။ 30 ထိုနောက်မှ အစာခေါင်းပါးသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ပေါ်လာ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌အလုံးစုံသောဝပြောခြင်းသည် တိမ်မြုပ်လျက် အစာခေါင်းပါးခြင်းအားဖြင့် တစ်ပြည်လုံးပျက်စီးလိမ့်မည်။ 31 အစာခေါင်းပါးခြင်းသည် အလွန်အားကြီးသောကြောင့်၊ အရင်ဝပြောခြင်း၏ လက္ခဏာမထင်ရ။ 32 ဖာရောဘုရင်သည် ထပ်၍အိပ်မက်မြင်ရသည်အရာမှာ၊ ထိုအမှုကို ဘုရားသခင် မြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၍ အလျင်အမြန်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ 33 သို့ဖြစ်၍ ဖာရောဘုရင်သည် ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူကို ရွေးချယ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်ကို အုပ်စိုးစေတော်မူပါ။ 34 ခန့်ထားတော်မူသောသူသည်လည်း တစ်ပြည်လုံး၌ အကြီးအကြပ်တို့ကိုခန့်ထား၍၊ ဝပြောသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်ပြည်လုံးတွင် ငါးဖို့တစ်ဖို့ကောက်ယူကြပါစေ။ 35 ထိုသူတို့သည်ဖြစ်လတ္တံ့သော မင်္ဂလာနှစ်တို့တွင် ရိက္ခာရှိသမျှကိုစုသိမ်း၍ ဖာရောဘုရင်ထံတော်၌ စပါးများကိုဆည်းပူးကြပါစေ။ မြို့များ၌လည်း ရိက္ခာကို သိုထားကြပါစေ။ 36 သို့ဖြစ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌အစာခေါင်းပါးသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ရောက်သောအခါ၊ ပြည်သူပြည်သားစားစရာဖို့ သိုထားလျက်ရှိနှင့်၍ အစာခေါင်းပါးသောကာလတွင် ပြည်တော်မပျက်ရဟု ဖာရောမင်းအားလျှောက်လေ၏။
37 ထိုသို့ယောသပ်လျှောက်သောစကားကို ဖာရောမင်းအစရှိသော ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်ကြ၍၊ 38 ဖာရောမင်းက၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ ဤကဲ့သို့သောသူကို အဘယ်မှာ ရှာ၍တွေ့မည်နည်းဟု ကျွန်တော်မျိုးတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ 39 ယောသပ်အားလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို သင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ သင်ကဲ့သို့ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသောသူမရှိ။ 40 သင်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်။ သင်၏စကားအတိုင်း ငါ၏ပြည်သားအပေါင်းတို့ကို ငါစီရင်စေမည်။ ရာဇပလ္လင်အားဖြင့်သာ ငါသည် သင့်ထက်ကြီးမြတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။Ref 41 တစ်ဖန်ကြည့်ပါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သင်အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ငါခန့်ထားပြီဟု ယောသပ်အားမိန့်တော်မူလျက်၊
14 ဒီးဖၤရိၤမၢလီၤပှၤကိးန့ၢ်စီၤယိၤသး, ဒီးဒုးဟဲက့ၤထီၣ် အီၤလၢဃိာ်ပူၤချ့ချ့, ဒီးလူၤအခၣ်ဆူၣ်, ဒီးကလံၤအ သး, ဒီးဟဲဝဲဆူဖၤရိၤအအိၣ်လီၤ.
15 ဒီးဖၤရိၤစံးဘၣ်စီၤယိၤသးန့ၣ်, ယမံမီၢ်တၢ်မံမီၢ်, ဒီး ပှၤဖးဝဲတအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်ဒီးယနၢ်ဟူပှၤစံး, တုၤ နနၢ်ဟူတၢ်မံမီၢ်ဒီး, နဖးအီၤသ့လီၤ.
16 ဒီးစီၤယိၤသးစံးဆၢဖၤရိၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ယၤဘၣ်, ယွၤကစံးဆၢဖၤရိၤမုာ်မုာ်လီၤ.
17 ဒီးဖၤရိၤစံးဘၣ်စီၤယိၤသးန့ၣ်, လၢယမံမီၢ်တၢ်န့ၣ် ကွၢ်ကွၢ်, ယဆၢထၢၣ်လၢထံမိၢ်ပှၢ်အနံၤ, 18 ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ဂီၤဖံးမိၢ်လၢအဖံးအညၣ်ဘီၣ်, ဒီးပကွၢ်ဂ့ၤနွံဒုဟဲထီၣ်, လၢထံမိၢ်ပှၢ်အပူၤ, ဒီးအီၣ်အဆၣ်လၢဆှဲကျါလီၤ. 19 ဒီး ကွၢ်ကွၢ်, ဂီၤဖံးမိၢ်အဂၤနွံဒုလၢအဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်လၢ ပကွၢ်အၢနးမး, ဒီးအဖံးအညၣ်ဃဲၤ, ဒ်အဝဲသ့ၣ်အၢဝဲ အသိးန့ၣ်ယတထံၣ်ဘၣ်လၢ အဲၤကူပတူးနီတပူၤနီတ ဘျီဘၣ်. 20 ဒီးဂီၤဖံးအဃဲၤဒီးအအၢတဖၣ်န့ၣ်အီၣ်ထီၣ် ကွံာ်ဂီၤဖံးအဘီၣ်လၢအအိၣ်ထီၣ်ဆိနွံဒုန့ၣ်လီၤ. 21 ဒီးနုာ် ဝဲလၢအပူၤဝံၤဒီး, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအနုာ်လၢအ ပူၤဘၣ်. ပကွၢ်အီၤအၢဒ်လၢအခီၣ်ထံးအသိးလီၤ. ဒီး ယဖုသံနီၣ်ထီၣ်လီၤ. 22 ဒီးယထံၣ်တၢ်လၢယမံမီၢ်တၢ်အပူၤ, ဒီးကွၢ်ကွၢ်,ဘုစဲၤနွံစဲၤမဲထီၣ်ဝဲလၢထံးတဘိဃီ, အဖျၢၣ်ပှဲၤဒီးဂ့ၤလီၤ.-
23 ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ဘုအဂၤနွံစဲၤလၢအဖျၢၣ်သွံးဒီးဃ့ထီၣ်လၢ ကလံၤမုၢ်ထီၣ်န့ၣ်မဲထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်ခံ န့ၣ်လီၤ. 24 ဒီးဘုစဲၤလၢအဖျၢၣ်သွံးန့ၣ်ယူၢ်လီၤကွံာ်ဘု စဲၤလၢအဖျၢၣ်ဂ့ၤနွံစဲၤလီၤ. ဒီးယဃဲၤဘၣ်ပှၤကွဲးလံာ်တ ဖၣ်, ဒီးပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်လၢယၤတအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.
25 ဒီးစီၤယိၤသးစံးဘၣ်ဖၤရိၤ, ဖၤရိၤအတၢ်မံမီၢ်န့ၣ် မ့ၢ် တၢ်တမံၤဃီလီၤ. တၢ်လၢယွၤကမၤတ့ၢ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ လၢဖၤရိၤလီၤ. 26 ဂီၤဖံးမိၢ်ဂ့ၤနွံဒုန့ၣ်မ့ၢ်နွံနံၣ်လီၤ. ဒီးဘု စဲၤဂ့ၤနွံစဲၤန့ၣ်မ့ၢ်နွံနံၣ်လီၤ. တၢ်မံမီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ လီၤ. 27 ဂီၤဖံးမိၢ်အဃဲၤဒီးပကွၢ်အအၢလၢအဟဲထီၣ်လၢ အလီၢ်ခံနွံဒုန့ၣ်မ့ၢ်နွံနံၣ်လီၤ. ဒီးဘုစဲၤလၢအဖျၢၣ်သွံးဒီး ဃ့ထီၣ်လၢကလံၤမုၢ်ထီၣ်နွံစဲၤန့ၣ်, မ့ၢ်နွံနံၣ်အိၣ်ဒီးတၢ် သၣ်ဝံၤလီၤဒိလီၤ.
28 အအံၤမ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်တ့ၢ်ဖၤရိၤ လီၤ. တၢ်လၢယွၤကမၤတ့ၢ်န့ၣ်ဒုးထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢဖၤရိၤ လီၤ.
29 ကွၢ်ကွၢ်, နွံနံၣ်ကဟဲအိၣ်ဒီးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဖးဒိၣ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤလီၤ. 30 ဒီးနွံနံၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိကအိၣ်ထီၣ်လၢအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဒီးပှၤက သးပ့ၤနီၣ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤန့ၣ်, ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိကမၤလၢာ်ကွံာ် ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ် လီၤ. 31 ဒီးပှၤတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢ ကီၢ်ပူၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအိၣ်လၢ အလီၢ်ခံအဃိန့ၣ် လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ်ကအိၣ်နးမးလီၤ. 32 – ဒီးတၢ် မံမီၢ်အိၣ်ဒီးဖၤရိၤခံမံၤခံဘျီ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်ယွၤကတဲာ် ကတီၤတၢ်တမံၤန့ၣ် ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤအဂ့ၢ်လီၤ. ဒီး ယွၤကဒုးကဲထီၣ်တၢ်န့ၣ်ချ့သဒံးလီၤ.
33 ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ မ်ဖၤရိၤကွၢ်ဃုပှၤအသူၣ်ဖးအသးဖး, ဒီးကူၣ်တၢ်သ့ကူၣ်တၢ်ဘၣ်တဂၤ, ဒီးပာ်အီၤလၢကီၢ် အဲၤကူပတူးအဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. 34 မ်ဖၤရိၤမၤဝဲ, ဒီးပာ် ပှၤအံးက့ၤကွၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် လၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအဖီခိၣ်, ဒီးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအနွံနံၣ်န့ၣ် ဟံးန့ၢ်ကီၢ်အဲၤကူပတူး ယဲၢ်ပူတပူတက့ၢ်. 35 ဒီးမ်ပှၤထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ အနံၣ်အဂ့ၤလၢအကဟဲဝဲခဲလၢာ်, ဒီးပာ်ဖှိၣ်ဘုဧိၤဟုဧိၤ လၢဖၤရိၤအစုဖီလာ်, ဒီးပၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢဝ့ၢ်တ ဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. 36 ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်ကအိၣ်ပာ် စၢၤလၢကီၢ်အဂီၢ်လၢ တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအနွံနံၣ်လၢအ ကအိၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအဃိန့ၣ်, ဒ်သိးထံဧိၤ ကီၢ်ဧိၤအသုတဟးဂီၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအဃိန့ၣ်တ ဂ့ၤလီၤ.
37 ဒီးတၢ်တမံၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလၢဖၤရိၤအမဲာ်, ဒီးလၢအခ့အ ပှၤအမဲာ်ခဲလၢာ်လီၤ. 38 ဒီးဖၤရိၤစံးဘၣ်အခ့အပှၤန့ၣ်, ပထံၣ်န့ၢ်ပှၤဒ်အံၤသိး, ပှၤလၢပကစၢ်အသးအိၣ်လၢအ ပူၤကသ့စ့ၢ်ကီးဧါ.
39 ဒီးဖၤရိၤစံးဘၣ်စီၤယိၤသး, မ့ၢ်ပကစၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါနၤလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ခဲလၢာ်ဒီး, ပှၤအသူၣ်ဖးအသး ဖး, ဒီးကူၣ်တၢ်သ့ကူၣ်တၢ်ဘၣ်ထဲသိးဒီးနၤအံၤတအိၣ် ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. 40 နကအိၣ်လၢယဟံၣ်အဖီခိၣ်, ဒီး ဖဲတၢ်ထီၣ်ဖျဲးလၢနထးခိၣ်န့ၣ် ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ဘၣ်ဒိကနၣ် ခဲလၢာ်လီၤ. ထဲလၢယလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ယကဒိၣ် န့ၢ်နၤလီၤ. 41 ဒီးဖၤရိၤစံးဘၣ်စီၤယိၤသး, ကွၢ်, ယပာ် လံနၤလၢကီၢ်အဲၤကူပတူးဒီဘ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်လံ.